barisamaadkii(suugaan) - SomaliNet Forums
Postby hargaysaay » Sun Mar 21, 2010 4:15 am
CAYDIID CUMAR GODANE (ciidagale)
Gabaygana waxaa tiriyey Caydiid Cumar Godane isagoo ka yimi hawd sare wakhtiguna uu ahaa wakhti colaad xumi dhex tiil Ciidagale iyo Ogaadeen Dagaalo ba’anina ay socdeen markaa wuxuu tegay magaalada hargeysa dabeed wuxuu arkay nimankii Sacad Muuse oo intii Ciidagale dagaalka Ogaadeen ku jiray magaadadii qabsaday markaasuu gabaygan tiriyey.
1. Dacwad gabay Cismaanoow beryahan, doon isma lahayn
2. Iska daayey maansooyinkaan, kuu dubbayn jiray
3. Ka durduurta caawana midbay dihatay laabtiiye.
4. Reer Cali afmeerkii ma dego, dixida weynaaye
5. Dalandool ka noqay Maalinguur, dawriguu dhaqaye
6. Dooshii Ammaadin iyo Webi, daawad laga qaadye
7. Darka reer Ugaas ugama shubo, daaqatiyo ciin e
8. Toddobaatan baa shalay la dilay, dagada Haaruune
9. Reer dalalna waatii la baday, dawlad guun culus
10. Iminkaanay daafdaafinay, doolo iyo ciid e
11. Ushan diiba maxamuudidaa, duhur la maydhaayo
12. Laaskaa degtuun lagu hayiyo, duubka iyo shaalku
13. Kabahan dhaxanta loo diidayiyo, diilalyada joogta
14. Qaylidan dawaarkii cadmeed, lagu daruuraayo
15. Halka geelu duurkaa ku yahay, waan dul tegayaaye
16. Daarood ismaaciilba waa, kaan damaaciyaye
17. Mayntaan dushuun ugu sidaa, waanan dayn Karin
18. Dekadahan haddaannaan burburin, sida daraawiishta
19. Daaduun haddaannaan kadhigin, sida raggii dooya
20. Haddaannaan dad qaladkaad ogayd, idinku soo daynin
21. Oo weerarkaan diro sanguh,u dacar ku xeegaysan
22. Walee daahirow dhalashadeen diirka sare maaha.
Gabaygan waxa ka jawaabay nin Sacad Muuse ah oo la yidhaahdo Haybe Deyr. Fadlan soo dir haddaad hayso.
ps this is just history not qabiil
suugaan waalan (cay)
by hargaysaay » Sat Apr 03, 2010 3:22 am » in Politics - Somaliland
by guryasame View the latest post
Sat Apr 03, 2010 3:48 pm
by HooBariiska » Thu Dec 11, 2014 10:55 pm » in Politics - Somaliland
Fri Dec 12, 2014 1:14 pm
SOMALI LITTERATURE ( suugaan)
by EMINEM. » Sat Feb 11, 2006 10:18 am » in Literature - Somali Language
by vwxy952 View the latest post
Sun Jan 04, 2009 4:31 am
Somaliland National Suugaan competition
by LiquidHYDROGEN » Thu May 05, 2016 1:17 pm » in Politics - Somaliland
Thu May 05, 2016 7:04 pm